May 31, 2020 kandai kanda 1
काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साको पक्ष र विपक्षमा मत राख्ने सबैको चासो थियो- नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकबारे प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले के निर्णय गर्ला ? जेठ १३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा […]
अभिमन्यू लामिछाने, उदयपुर, १८ जेठ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण पर्याप्त मल आपूर्ति नहुदा उदयपुरमा रासायनिक मल अभाव भएको छ । कृषकहरुको माग अनुसार सरकारले रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसक्दा जिल्लामा मलको अभाव भएको हो । फौजी किराबाट मकै बाली जोगाएका उदयपुरे […]
बढ्दैछन् दक्षिण एसियामा कोरोनाका सक्रिय सं,क्रमित- भारत विश्वकै चौथो, पाकिस्तान १० र बंगलादेश ११ औं स्थानमा
एजेन्सी । भारतसहित समग्र दक्षिण एशियामा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या तिव्र रुपमा बढेको छ । सक्रिय संक्रमणमा फ्रान्सलाई उछिनेर भारत विश्वकै चौथो स्थानमा आइपुगेको छ । यहाँ ९२ हजार २ सय ४४ जनामा सक्रिय संक्रमण छ । सक्रिय संक्रमित, निको भएका र मृतकको संख्या समेत जोड्दा भारतको कूल […]
सेना राष्ट्रपतिले परिचालन गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले ?
काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबारको क्याबिनेटले गरेको यो निर्णयलाई आइतबार साँझसम्म राष्ट्रपतिले औपचारिकता दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सेना परिचालनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यही […]
कालिकोटमा बाहिरबाट आउने भीड बढ्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समस्या
मनिराज पाण्डे, कालिकोट, १८ जेठ । कालिकोटका स्थानीय तहले अपेक्षा गरे भन्दा बढी स्थानीयहरु बिभिन्न मुलकबाट भित्रिएपछि स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन गर्न निकै सकस भएको छ । जेष्ठ ३ गते यता बिभिन्न मुलकबाट कालिकोट भित्रिनेको संख्या २ हजार ५ सय ७७ पुगेको छ । अझै भारत लगायत बिभिन्न […]
भारतको पश्चिम बंगालमा केही मन्दिर र मस्जिदहरु जुन १५ सम्म नखुल्ने
एजेन्सी, १८ जेठ । पश्चिम बंगाल सरकारले जुनबाट हुगली किनारस्थित बेलूर मठ बाहेकका सबै धार्मिक स्थलहरु खोल्ने निर्णय गरेको बावजूद उत्तर २४ परगना जिल्लाको दक्षिण काली मन्दिर र बीरभूमि जिल्लास्थित तारापीठ मन्दिर १५ जुनसम्म बन्द राख्ने निर्णय गरेको छ । अर्कोतर्फ, इमामहरूको संगठन बंगाल इमाम संघले पनि मस्जिदहरूलाई […]
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट पठन सुचारु गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयसम्म पढाई अवरुद्ध भएका कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै […]
राजेन्द्र अधिकारी, पोखरा, १८ जेठ । खोलाको वहावलाई रोकथाम गर्ने भन्दै खोलामा जेसीभी सञ्चालन गरेका वडाध्यक्षले गिटीबालुवा प्लटिङ गरिएको जग्गामा थुपार्न थालेपछि स्थानीयवासी सशंकित भएका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १३ कुँडहरका वडाध्यक्ष दर्शन लामा भनिने लेखबहादुर तामाङले धमाधम दर्जनौं ट्रिपर, ट्रयाक्टर र ट्रकको प्रयोग गर्दै गिटीबालुवा […]
घनश्याम मिश्र, जनकपुरधाम, १८ जेठ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषबाट प्रदेशका विभिन्न अस्पतालले हाल सम्म ८ करोड २३ लाख २५ हजार रकम प्राप्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले पछिल्लो चरणमा मात्र विभिन्न अस्पताललको लागि ५ करोड १३ लाख ७५ हजार निकासा […]
काठमाडौं, १८ जेठ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ बाट मृ त्यु हुनेको संख्या नेपालमा ८ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दैलेखको दुल्लुमा हिजो र आज मृत्यु भएका दुई जनाको मृ त्युमा कोरोना भा इरसको सं क्रमणको पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका […]
पोखरा । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ कि ग र्भवती नरदिता गर्बुजालाई हेलिकप्टरमार्फत उ,पचारका लागि पोखरा ल्याइएको छ । प्रसुति गराउन स्थानीय स्वास्थ्य चौकी लगिएकी उनको निरन्तर र क्तस्राव भइरहेको र स्वा स्थ्यकर्मीले रेफर गरेपछि हेलिकप्टरमार्फत उ द्धार गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको हो । स्थानीय स्वा स्थ्यकर्मीले नै […]
काठमाडौं । बाजुरामा दुई वर्षीया बा,लिकाको कोरोना भा,इरस (कोभिड–१९) का कारण मृ त्यु भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला अस्पताल बाजुराको आ इसोलेसनमा उ पचाररत उनको शनिबार राति करिब २ बजे मृ त्यु भएको थियो । उनलाई १५ गते अ स्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
हेटौडाकी पाँच महिनाकी ग,र्भवती महिला कोरोनाबाट मुक्त
केदार शर्मा, चितवन,१८ जेठ । भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ निवासी पाँच महिनाकी ग,र्भवती महिला कोरोनामु क्त भएकी छिन् । शुक्रवार र शनिवार २४ घण्टाको फरकमा परीक्षण गरिएको दुई दिनको रिपोर्ट लगातार नेगेटिभ आएपछि उनी कोरोना भाइ,रसको सं,क्रमणबाट मुक्त भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका सूचना […]
प्रदेश- २ मा आज थप ६० जनामा काेराेना भा,इरस सं,क्रमण पुष्टि
घनश्याम मिश्र जनकपुरधाम, १८ जेठ । प्रदेश- २ मा आज बिहान थप ६० जना व्यक्तिमा कोरोना भा,इरस सं,क्रमणको पुष्टि भएको छ । जसअनुसार रौतहटमा २९ जना, धनुषामा २१ जना, सर्लाहीमा १० जना सं,क्रमित पुष्टि भएकाे बताइएकाे छ । रौतहटमा सं,क्रमति भएकाहरुमध्ये दुर्गाभगवती क्वारेन्टाइनका ८ जना, मदरसा क्वारेन्टाइनका १० […]
लकडाउनको कारण महागंगा आरतीको वार्षिकोत्सव स्थगित
घनश्याम मिश्र जनकपुरधाम , १८ जेठ । कोरोना म,हामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको कारणले गर्दा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष हुने गरेको महागंगा आरती स्थागित भएको छ । प्रा णघातक म हामारी कोरोना भा इरस संक्र मण रोगको पूर्णतः नियन्त्रण र मानवीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखि यस वर्ष हुने […]
काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले बजेटमार्फत कृषिमा प्रयोग हुने वस्तु विउविजन र विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको भन्सार दर प्रति विरोध सुरु भएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई राजश्वको मुख्य आधार बनाउँदै लाने सरकारी नीति भए पनि उल्टै सरकारले आन्तरिक उत्पादन खपत गर्ने वस्तुमा कर लगाउनु व्यवहारतः गलत भएको टिप्पणी गर्न […]